Lucidchart: Wada-shaqeyn oo arag Wireframe-kaaga, Gantt Charts, Habka Iibka, Automation-ka Suuqgeynta, iyo Safarrada Macmiilka | Martech Zone
Aragtidu waa lama huraan marka ay timaaddo faahfaahinta habsocod adag. Haddi ay tahay mashruuc leh jaantuska Gantt si loo bixiyo dulmar heer kasta oo tignoolajiyada geynta ah, suuq geynta suuqgeynta ee soo qulqulaya isgaadhsiinta shakhsi ahaaneed ee rajada ama macaamilka, habka iibka si loo arko isdhexgalka caadiga ah ee habka iibka, ama xitaa jaantus kaliya Aragtida safarrada macaamiishaada… awoodda aad u leedahay in ay wax ku arkaan, wadaagaan, oo ay iska kaashadaan geeddi-socodku waa tallaabo muhiim ah oo ka mid ah habka fikirka iyo hirgelinta.
Muddo sanado ah, tan waxaa lagu sameeyay kombuyuutar desktop adag sida Visio, ama si fudud ayaa lagu sameeyay aalad soo bandhigid sida Powerpoint. Si kastaba ha noqotee, softiweerka desktop-ka si fudud uma bixiyo habka kooxaha fog fog, agabka, iyo macaamiisha. Gali Lucidchart, codsi jaantus ku salaysan daruuro kaas oo isu keena kooxaha si ay u sameeyaan go'aamo wanagsan oo ay u dhisaan mustaqbalka.
Goobta Shaqada Muuqaal ee Lucidchart
Lucidchart waa goob shaqo oo muuqaal ah oo isku daraysa jaantuska, xog-ururinta, iyo iskaashiga si loo dardargeliyo fahamka iyo dhaqaajinta hal-abuurka. Xalkan dareenka leh, ee daruuriga ku salaysan, qof kastaa wuxuu baran karaa inuu u shaqeeyo muuqaal iyo iskaashi wakhtiga dhabta ah isagoo dhisaya jaantusyada socodka, maaweelada, jaantusyada UML, iyo in ka badan.
Iyadoo LucidchartShakhsiyaadka iyo kooxuhu waxay si fudud u khariidad karaan jaantusyo leh habab habraac caadi ah. Faa'iidooyinka madal waxaa ka mid ah:
Abuur aragti wadaag - Si dhakhso leh u sawir hab-socodka, nidaamyada, iyo qaab-dhismeedka kooxdaada. Jaantuska caqliga leh wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sawirto fikradaha kakan si dhakhso leh, cad oo iskaashi leh.
Qof walba isku bog ku hel - Luuqadda aragga guud waxay deddejisaa wada shaqaynta waxayna wanaajisaa isgaarsiinta. Qalabku wuxuu la socdaa qaabaynta, faallooyinka qaabaynta gaarka ah, wada sheekaysiga tafatiraha dhexdiisa, wax-wada-qorista-waqtiga-dhabta ah, cursors iskaashi, iyo ogeysiisyo.
Qorshayaal nolosha keena - Lucidchart Waxay kuu ogolaanaysaa inaad diirada saarto oo aad hore ugu soo gudubto ujeedo leh. Soo noolee qorshayaasha kicin doona ganacsigaaga.
Madalku waa kayd dukumeenti ganacsi u diyaarsan oo la mid ah Goobta Shaqada Google, Microsoft, Atlassian, Slack, iyo in ka badan.
Codsigu aad buu u adag yahay oo waxaan sidoo kale uga faa'iidaysan doonaa qaabaynta fiilooyinka. Waxay sidoo kale bixiyaan awooda lagu daro jaantusyada ururka, mockups iPhone, jaantusyada UML, jaantusyada shabakada, khariidadaha maskaxda, maabka goobta, jaantusyada Venn, iyo in ka badan.
Lucidchart waxay naga caawisaa ara ahaan xalinta dhibaatooyinka adag anagoo abuuraya jaantusyada qaab dhismeedka iyo jaantusyada socodka kuwaas oo abuura cadcad oo ka caawiya kooxdayada la qaybiyey inay si dhakhso leh ugu kiciyaan codebase iyo nidaamyada. … Waxay u ogolaataa xubno badan oo kooxeed inay wada shaqeeyaan isku mar, taasoo sahlaysa in laga wada shaqeeyo koox si buuxda loo qaybiyay.
Bilaabidda waa sahlan tahay waxaana jira kheyraad aad u badan oo ku jira kanaalka YouTube-ka haddii aad jeclaan lahayd inaad bilowdo isticmaalka goobta. Madalku waxa kale oo uu leeyahay apps mobile iyo tablet on iOS iyo Android.
Lacag la'aan ku biir!
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay lucidchart oo waxaan u isticmaalayaa isku xirka maqaalkan oo ay la socdaan xiriiriyeyaasha kale ee xiriirka la leh.
Tags: iskaashiSafarka macaamiishajaantusyada socodkaqulqulka qulqulkashaxda ganttqaamuushababka khariidayntasuuq-geynta suuqajeesjeessocodka habkahabraaca habayntahabka iibkaiskaashiga kooxdajaantusyada UMLgoobta shaqada muuqaalkagoobta shaqada muuqaalkaxirmooyinka xargaha